merolagani - एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुँदा नेप्से ९ अंक बढ्यो, ३ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट
एक अर्बभन्दा बढीको कारोबार हुँदा नेप्से ९ अंक बढ्यो, ३ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट
Jul 05, 2020 04:04 PM Merolagani
साताको पहिलो कारोबार दिन १ अर्बभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। यस दिन १७२ कम्पनीको २० हजार ४७४ पटकको कारोबारमा १ अर्ब ३ करोठ ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको २१८ लाख ६ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।
नेप्से परिसूचक ९.३५ अंक बढेर बन्द भएको छ। कारोबारको पहिलो एक घण्टामा तीव्र उतारचढाव भएको बजारमा मध्यान्हपछि करिब स्थिर देखिएको छ।
अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात गत बिहीबार ६ प्रतिशत घटेर नकारात्मक सर्किट लागेर बन्द भएको थियो। यस दिन नेप्से ०.७४ प्रतिशत बढेर १ हजार २६५.४५ विन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरै, सेन्सेटिभ इण्डेक्स यस दिन ०.५५ अंक अर्थात ०.२० प्रतिशत बढेर २६९.५८ विन्दुमा पुगेको छ।
३ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट
आइतबार ३ कम्पनीको शेयरमूल्यमा सर्किट लागेको छ। यस दिन सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो भने साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन र सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयरमूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको हो। यस दिन सूर्योदयको शेयरमूल्य ५४ रुपैयाँ बढेर ६०३ रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ्ग र सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयरमूल्य यस दिन क्रमशः २८५ रुपैयाँ र १३ रुपैयाँ घटेको छ।
नेपाल पुनर्बीमा र नेपाल लाइफको सर्वाधिक कारोबार
आइतबार नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी शेयर खरिदबिक्री भएको छ। पुनर्बीमा कम्पनीको यस दिन ९ हजार ७१३ पटकको कारोबारमा १५ करोड १२ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदबिक्री भएको छ भने नेपाल लाइफको कारोबार रकम १० करोड नाघेको छ।
७ उपसमूह हरियो
यस दिन कारोबारमा आएका १२ उपसमूहमध्ये ७ उपसमूह बढेर हरियो भएका छन् भने बाँकी ५ उपसमूह घटेर राता भएका छन्। जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक यस दिन २.९, अन्यको २.९४, उत्पादनको ०.८१, होटलको ०.५३, निर्जीवन बीमाको ०.५, लघुवित्तको ०.४७ र बैंकिङ्गको ०.३१ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, यस दिन व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधित ८.४६ प्रतिशत घटेको छ।
पब्लिक कम्पनी भएपछि एनसेलले यसरी जारी गर्दै छ साधारण सेयर, लगानीकर्ताको शेयर स्वामित्व के हुन्छ ?
Aug 08, 2020 06:56 PM
टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो कम्पनीको रूपमा स्थापित एनसेल पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छ। पब्लिकमा रूपान्तरण भएसँगै उसले सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने बाटो खुला भएको छ।
थप तीन जनाको कारोना संक्रमणका कारण निधन,कुल संख्या ७३ पुग्याे
Aug 08, 2020 04:37 PM
संक्रमित मानिसबाट जनावरलाई पनि कोरोनाको खतरा, जनावरबाट सर्ने खतरा कति?
Aug 08, 2020 04:29 PM
काठमाडौं उपत्यकाका ६२ जना समेत गरी शनिबार ३७८ जनामा संक्रमित थपिए
Aug 08, 2020 04:27 PM
अभिषेक बच्चनले जिते कोरोना
Aug 08, 2020 04:07 PM
गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कम्पनी विश्लेषण
Aug 08, 2020 11:55 AM